Esi Tọgharia Windows 10 Ọsọ ọsọ na nchekwa - Nduzi Nka | Nzukọ Ekwentị
Esi tọgharịa Windows 10 ọsọ ọsọ na nchekwa
Mgbe ngwaọrụ malitere igosi mgbaàmà nke ike ọgwụgwụ, ihe mbụ anyị kwesịrị ime tupu anyị ewepụ ya bụ lelee ihe ndị nwere ike ịbụ nke arụmọrụ arụmọrụ nke ngwaọrụ ahụ na-enwe, ọ bụrụ smartphone, mbadamba ma ọ bụ kọmputa, ngwaọrụ ndị sistemụ arụmọrụ na-achịkwa.
N’isiokwu a anyị ga-egosi gị esi tọgharịa Windows 10 site na ọkọ, nke ahụ bụ, hapụ kọmputa ahụ dị ka a ga - asị na anyị ka wụnye Windows dị ọcha Windows 10. N'oge usoro a, a na - ehichapụ ngwa ọ bụla anyị rụnyere na kọmputa ahụ, ya mere ọ bụkwa nhọrọ magburu onwe ya iji kpochapụ otu.
1 Ndụmọdụ ị ga-ebu n'uche tupu ịtọgharịa Windows 10
1.1 Ndabere nke akwụkwọ
1.2 Lelee ngwa ndị anyị etinyela
1.3 A na-ewepụkwa ntọala Windows
2 Nzọụkwụ Tọgharia Windows 10
Ndụmọdụ ị ga-ebu n'uche tupu ịtọgharịa Windows 10
Ndabere nke akwụkwọ
Agbanyeghị n'oge usoro a, Windows na-enye anyị ohere idetu otu akwụkwọ niile anyị nwere na ngwaọrụ anyị. nke ahụ apụtaghị na anyị ekwesịghị ime nkwado ndabere dị ka ihe ị ga-eme. Ọ bụ ezie na usoro a fọrọ nke nta ka ọ ghara ịda ada, ị nwere ike imetụ 1% nke ndị dara usoro ahụ aka.
Mee nkwado ndabere na Windows 10 Ọ bụ usoro dị mfe na ngwa ngwa ọ bụrụhaala na anyị nwere usoro faịlụ guzobere ebe anyị na-echekwa akwụkwọ niile anyị mepụtara, ebe ọ bụ naanị na anyị ga-ahọrọ ya weghachite faịlụ iji weghachite ya ma emesia anyị weghachite Windows 10 anyị.
Ọ bụrụ na ịnweghị usoro faịlụ guzobere, ma ị nwere faịlụ ahụ gbasaa na desktọọpụ, ihe kachasị mma ị nwere ike ime bụ detuo akwụkwọ na folda niile na folda My Documents ma mee nkwado ndabere na mpụta ma ọ bụ soro usoro nke anyị zuru ezu nke a nkuzi.
Lelee ngwa ndị anyị etinyela
Tupu ịmalite usoro a ma zere igbu oge ozugbo anyị megharịrị akụrụngwa anyị, ọ bụ mepụta ndepụta na ngwa niile anyị awụnyere nakwa na anyị na-eji mgbe niile. Ngwa niile ndị ahụ tupu eweghachiri arụnyere mana anyị anaghị eji, ọ dịghị mkpa ịtinye ha ọzọ, ebe ọ bụ na ha agaghị adị mkpa na ihe niile ha na-eme na-emetụta, n'ikpeazụ, arụmọrụ nke otu anyị.
Ọ bụrụ na ngwa ndị anyị arụnyere anyị azụtara / budata na Storelọ Ahịa Microsoft, anyị ekwesịghị ịchọ Na akaụntụ email anyị ma ọ bụ na nkọwa anyị nke nọmba ikike kwekọrọ. Ọ bụrụ na ọ bụghị, yana ndepụta nke ngwa ndị anyị mepụtara, anyị ga-ewepụta nọmba Oghere ahụ ozugbo na ngwa ahụ iji zere igbu oge n'ịchọ ya.
Akụkụ ọzọ nke ị kwesiri iburu n'uche n'etiti ngwa ị na-eji eme ihe mgbe niile bụ ndebiri nke inwere ike ibudata na Office, macros, Photoshop brushes ma ọ bụ plugins, mgbakwunye ihe nchọgharị na ị na-eji mgbe niile… Ọzọkwa, ọ bụrụ na kọmputa gị nwere eserese kaadị na-adịghị ike n'ime mbadamba, ị kwesịrị ị na-akpachara anya na-nhazi ụkpụrụ anyị nwere, ma site na-eme ka a kpọọ ma ọ bụ exporting ha na mpụga faịlụ ma ọ bụrụ na ọ na-enye anyị nhọrọ ahụ.
A na-ewepụkwa ntọala Windows
Otu n'ime akụkụ ọjọọ nke nhọrọ a nke Windows na-enye anyị dị na nke ahụ echekwaghi nhazi na anyị guzosie ike na otu anyị. Nke a bụ n'ihi na ihe kpatara na akụrụngwa anyị nwere ike ịbaghị arụ ọrụ na nhazi nke ọkwọ ụgbọ ala, kaadị eserese, njikọ Bluetooth ...
Nzọụkwụ Tọgharia Windows 10
Ozugbo anyị lebara anya na ngalaba niile egosiri m gị na ngalaba ndị gara aga, oge eruola ịmalite ịmalite ịme ihe ndị dị mkpa iji weghachite Windows 10. Ihe mbụ anyị ga - eme bụ ịnweta Nhọrọ nhazi Windows site na mkpirisi ụzọ Windows igodo + i.
Ọzọ, anyị na-enweta nhọrọ Mmelite na nchekwa. N'ime ngalaba a, na kọlụm aka ekpe, pịa Iweghachite.
Ugbu a, anyị na-aga kọlụm aka nri na Tọgharia ngalaba PC a anyị pịa bọtịnụ ahụ Bido.
Ọzọ, nhọrọ mgbake abụọ na Windows 10 na-enye anyị:
Dowe faịlụ m: Hichapụ ntọala na ngwa mana debe faịlụ nkeonwe.
Wepu ha niile: Hichapụ faịlụ niile, ngwa na ntọala.
N'okwu anyị, ọ bụ ezie na anyị emeela faịlụ ndabere nke faịlụ anyị niile, anyị ga-ahọrọ nhọrọ mbụ: Debe faịlụ nkeonwe, ya bụ, dọkụmentị, onyonyo na vidiyo anyị chebere na kọmputa anyị.
Ọ bụrụ n ’ịchọrọ iwepụ kọmputa gị ọ bụla, ma ngwa arụnyere na nhazi nhọrọ yana faịlụ, anyị chọrọ ịhapụ ya dị ka a ga - asị na anyị wụnye Windows 10 site na ncha, anyị ga-ahọrọ nhọrọ nke abụọ: Wepu ha niile.
Ọzọ, windo ọhụrụ ga-apụta ebe a gwara anyị usoro anyị ga - arụ:
Wepu ngwa na mmemme
A ga-ewepụ nhọrọ nhazi iji weghachi ụkpụrụ ndabara.
A ga-edebe data nkeonwe metụtara akaụntụ anyị, gụnyere nọmba ikikere.
Ọ bụrụ na anyị chọrọ ịlele nke ngwa a ga-ewepụ, anyị ga-pịa Ndepụta nke ngwa a ga-ewepụ. Ọ bụrụ na ị lelee anya, na ndepụta a A naghị egosipụta ngwa ndị anyị wụnyere na Storelọ Ahịa Windows, ma ọ bụrụ na ọ bụghị ndị nke anyị wụnye aka, ya bụ, anyị ebudatara ha na ibe weebụ. Anyị pịa ọzọ.
CHETA: Ọ bụrụ n ’ị lụbeghị ndepụta a nke m tụrụ aro, ịnwere ike iwe nseta ihuenyo site n’izitere gị ya site na mail tupu ịmalite ọrụ ahụ.
Iji malite usoro mweghachi, pịa Tọgharia. Enweghị ịlaghachi azụ, yabụ buru n’uche na ọ bụrụ na anyị ahapụla usoro ọ bụla anyị gosipụtara n’isiokwu a, ị kwesịrị ịlaghachi ma mee ya ebe ọ bụ na enweghị ike ịkwụsị usoro ahụ.
Ozugbo usoro malitere, usoro nke ga-adịgide oge ma ọ bụ obere oge dabere na ọnụ ọgụgụ nke ngwa na anyị arụnyela na ike nke akụrụngwa anyị, anyị agaghị enwe ike iji akụrụngwa ahụ. Ozugbo emechara usoro ahụ, a ga-egosipụta ihuenyo mmalite Windows, ebe anyị ga-ede paswọọdụ maka akaụntụ anyị.
Mgbe ị na-abanye, anyị ga-elele etu ewepụla ngwa niile anyị tinyere na kọmputa anyị a na-egosikwa nke a dị ka nke ọhụrụ, dị ka a ga - asị na anyị ka wụnye Windows 10 na kọmputa anyị, mana iji uru nke ịnwe faịlụ niile nke anyị mepụtara ma ọ bụ chekwaa na kọmputa ahụ
Pathzọ zuru ezu na edemede: Nzukọ Ekwentị » Sistemụ arụmọrụ » Esi tọgharịa Windows 10 ọsọ ọsọ na nchekwa
Tọghata CD Audio ka MP3: Best PC Mmemme
Otu esi emepụta igwe ojii okwu na ntanetị na n'efu?